အတတ်ပညာ iblog.isowa.io – ကျွန်တော့်မှာ ရှိတဲ့ အရည်အချင်းတွေနဲ့ လုပ်ခဲ့တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။… အလကား…
ကျွန်တော့်မှာ ရှိတဲ့ အရည်အချင်းတွေနဲ့ လုပ်ခဲ့တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။… အလကား…
တွင်တင်ခဲ့သည်။ May 29, 2022 အားဖြင့် Piotr Sowa — စာပြန်ပါ။
မင်္ဂလာပါ, my dear readers. Today I would like to write about my way of growing in my career. It took mealot of time, really. In the elevator speech saying I wasazero, then the hero, then even superhero forashort period… and then I realized the equation. That team player behavior equals me = me+team, and grows exponentially. For everyone who loves math, you probably see that. If Continue ReadingThe way from zero to team player→
Posted in Career, ဝါသနာ	| Tagged ဝါသနာ, Career	| စာပြန်ပါ။
တွင်တင်ခဲ့သည်။ May 17, 2022 အားဖြင့် Piotr Sowa — စာပြန်ပါ။
Posted in Career, TEDx, ဝါသနာ	| Tagged Amazing, DarkNet, Carrer, GPU-Computing, AI, Software, Ideas, TED, TEDx	| စာပြန်ပါ။
တွင်တင်ခဲ့သည်။ May 1, 2022 အားဖြင့် Piotr Sowa — စာပြန်ပါ။
Posted in Career, TEDx, ဝါသနာ	| Tagged Work, Carrer, PhD, Motivation	| စာပြန်ပါ။
တွင်တင်ခဲ့သည်။ April 15, 2022 အားဖြင့် Piotr Sowa — စာပြန်ပါ။
Posted in TEDx	| Tagged Programming, Design, Stories, TED, Amazing, Artificial Intelligence	| စာပြန်ပါ။
တွင်တင်ခဲ့သည်။ ဒီဇင်ဘာ 1, 2021 အားဖြင့် Piotr Sowa — စာပြန်ပါ။
Posted in ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း။, ဝါသနာ	| Tagged စမ်းသပ်မှုများ, Performance, Design	| စာပြန်ပါ။
Posted in ဝါသနာ, ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း။, Coding ပါ။, Career	| Tagged Performance, Design, Security, Draw	| စာပြန်ပါ။
iSowa.io ၏ အကျဉ်းချုပ် 2021
တွင်တင်ခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ 27, 2021 အားဖြင့် Piotr Sowa — စာပြန်ပါ။
Posted in ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း။, Coding ပါ။, Career, ဝါသနာ	| စာပြန်ပါ။
Windows ရှိ OpenCL ရှိ Darknet 11 x၆၄
တွင်တင်ခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ 20, 2021 အားဖြင့် Piotr Sowa — စာပြန်ပါ။
မင်္ဂလာပါ, Windows တွင်စိန်ခေါ်မှုများစွာရှိသည်။ 11 AMD Radeon RX ဖြင့် x64 6900 XT. ပြီးခဲ့သောလအနည်းငယ်တွင် ကျွန်ုပ်သည် Windows ပေါ်တွင် တည်ဆောက်ရန် အခါအားလျော်စွာ ကြိုးစားလာသည်။ 10 x64 ကို ပထမနှင့် နောက်ပိုင်းတွင် Windows သို့ အပ်ဒိတ်လုပ်ခဲ့သည်။ 11 x၆၄. ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတွေ ရှိတယ်။: 1) ထောက်လှမ်းခြင်းအတွက် သုံးစွဲသည့်အချိန်သည် အလွန်ရှည်လျားသည်။ 10 GNU/Linux သို့မဟုတ် macOS ထက် အဆပိုများသည်။. 2) Detections are wrong Continue ReadingWindows ရှိ OpenCL ရှိ Darknet 11 x၆၄→
Posted in ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း။, Coding ပါ။, ဝါသနာ	| Tagged CNN, DarkNet, ဂ, ပြတင်းပေါက်, စမ်းသပ်မှုများ, ဆောက်, OpenCL	| စာပြန်ပါ။
DealBook တွင် Tim Cook 2021
တွင်တင်ခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ 19, 2021 အားဖြင့် Piotr Sowa — စာပြန်ပါ။
မင်္ဂလာပါ, I would not be myself If I did not bring this to my blog. It is not any secret that I love Apple products. The toys for big boys, in the beginning, become super-powerful computers on your packet and even hand. That would be my elevator story about Apple. Please do not get me wrong, I am not as usual advertising, but the thing isavery influencing interview so, please Continue ReadingDealBook တွင် Tim Cook 2021→
Posted in ဝါသနာ	| စာပြန်ပါ။
တွင်တင်ခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာလ 9, 2021 အားဖြင့် Piotr Sowa — စာပြန်ပါ။
မင်္ဂလာပါ, today I am underabig impression asaparticipant of the NVIDIA GTC 2021. So there are still two days of GTC 2021 left. To me, it all started with the NVIDIA CEO Jensen Huang’s vision, and this morning was the start of the conference with him. And his amazing vision in the GPU-Computing area. And I do not want to waste any minute at this moment and watch more Continue ReadingNVIDIA GTC 2021→
Posted in Career, ဝါသနာ	| Tagged Artificial Inteligence, Machine Learning, Deep Learning, Vision, Performance, GPU, CPU, အဓိက မှတ်ချက်, Intel, GPU-Computing	| စာပြန်ပါ။
တွင်တင်ခဲ့သည်။ October 31, 2021 အားဖြင့် Piotr Sowa — စာပြန်ပါ။
Posted in ဒီဇိုင်းဆွဲခြင်း။, ဝါသနာ	| Tagged Deep Learning, Vision, Performance, GPU, CPU, အဓိက မှတ်ချက်, Intel, GPU-Computing, Artificial Inteligence, Machine Learning	| စာပြန်ပါ။
တွင်တင်ခဲ့သည်။ October 27, 2021 အားဖြင့် Piotr Sowa — စာပြန်ပါ။
မင်္ဂလာပါ, I would like to present to you the best chess game I love, it is simple, ascetic, strong enough and always have time even if it isabit anonymous, the game hasaname and it is Deep Shredder 13. The game was quite difficult in many moments where I did not know what to do. I almost lose my voice to comments entire game took me almost 1 hour. Continue ReadingThe Best Chess Opponent→
Posted in Career, ဝါသနာ	| Tagged Training, Happy, Chess, Game	| စာပြန်ပါ။
တွင်တင်ခဲ့သည်။ October 26, 2021 အားဖြင့် Piotr Sowa — စာပြန်ပါ။
မင်္ဂလာပါ, I was looking today for inspiration. Truth be told, thanks to the inspiration, I can keep going hard work. My PhD studies program mentor used to say that I am not working like an Owl, but working like an Ant :P. I learned that knowledge is essential nowadays, and one of the influencers at Linked-In recently wrote that relaxing isaresponsibility. So, please look inside you, find this responsibility and Continue ReadingI pull up at the club→
Posted in ဝါသနာ	| Tagged Speech, Inspiration	| စာပြန်ပါ။
တွင်တင်ခဲ့သည်။ October 17, 2021 အားဖြင့် Piotr Sowa — စာပြန်ပါ။
တွင်တင်ခဲ့သည်။ September 19, 2021 အားဖြင့် Piotr Sowa — စာပြန်ပါ။
Posted in ဝါသနာ	| Tagged Strategy, RTS, Games, The Best	| စာပြန်ပါ။
တွင်တင်ခဲ့သည်။ September 13, 2021 အားဖြင့် Piotr Sowa — စာပြန်ပါ။
Primary Sidebar Widget ဧရိယာ
Apple YouTube ချန်နယ်
Intel Newsroom ချန်နယ်
NVidia Studio ချန်နယ်
Google Cloud နည်းပညာ
.NET Rocks! ထောင့်
WebRTC with Liz Moi June 23, 2022 ကားလ်ဖရန်ကလင်
gRPC in .NET with Irina Scurtu June 9, 2022 ကားလ်ဖရန်ကလင်
Modernizing .NET Apps with Mark Rendle May 26, 2022 ကားလ်ဖရန်ကလင်
Using Web Components with Jemima Abu May 19, 2022 ကားလ်ဖရန်ကလင်
Secure Open Source Practices with Jillian Ratliff May 12, 2022 ကားလ်ဖရန်ကလင်
Studio 2022 Extensions with Mads Kristensen May 5, 2022 ကားလ်ဖရန်ကလင်
Pivoting your Startup with Phil Haack April 28, 2022 ကားလ်ဖရန်ကလင်
Comparing Infrastructure-as-Code with Chris Klug April 21, 2022 ကားလ်ဖရန်ကလင်
Web Apps to Desktop Apps using Photino with Otto Dobretsberger April 14, 2022 ကားလ်ဖရန်ကလင်
Debugging Async Code with Isadora Rodopoulos April 7, 2022 ကားလ်ဖရန်ကလင်
မူပိုင်ခွင့် © 2022 iblog.isowa.io. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူပိုင်ခွင့်ကိုလက်ဝယ်ထားသည်.
သင့်အတွေ့အကြုံကို မြှင့်တင်ရန် ဤဝဘ်ဆိုက်သည် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုသည်။. ဒါကို မင်းအဆင်ပြေတယ်လို့ ငါတို့ယူဆလိမ့်မယ်။, ဒါပေမယ့် ဆန္ဒရှိရင် ဖယ်လို့ရပါတယ်။. ကွတ်ကီး ဆက်တင်များ လက်ခံပါတယ်။ ငြင်းပယ်ပါ။
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ & ကွတ်ကီးမူဝါဒ
ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် လိုအပ်သော cookies များသည် လုံးဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။. ဤအမျိုးအစားတွင် ဝဘ်ဆိုက်၏ အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များကို သေချာစေသည့် ကွတ်ကီးများသာ ပါဝင်သည်။. ဤ cookies များသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။.
ဝဘ်ဆိုက်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အထူးမလိုအပ်သည့် မည်သည့် cookies များကိုမဆို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှတစ်ဆင့် အသုံးပြုသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို စုဆောင်းရန်အတွက် အထူးအသုံးပြုသည်။, ကြော်ငြာများ, အခြားထည့်သွင်းထားသော အကြောင်းအရာများကို မလိုအပ်သော ကွတ်ကီးများဟု ခေါ်သည်။. ဤ cookies များကို သင့်ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် မဖွင့်မီ အသုံးပြုသူ၏ သဘောတူညီချက်ကို ရယူရန် မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါသည်။.
အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ ပေးပို့ပါ။ သင့်နာမည် သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာ မလုပ်တော့
ပို့စ်မတင်ဖြစ်ပါ။ - သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာများကို စစ်ဆေးပါ။!
အီးမေးလ်စစ်ဆေးခြင်း မအောင်မြင်ပါ။, ထပ်စမ်းကြည့်ပါ။
ဆောရီး, သင့်ဘလော့ဂ်သည် အီးမေးလ်ဖြင့် ပို့စ်များကို မမျှဝေနိုင်ပါ။.
%ဃ ဘလော့ဂါတွေက ဒါကို သဘောကျတယ်။: